Home Wararka Gudaha Guurka: Wiil uu aabihii u diiday inuu guursado oo booliska ku dacweeyay
Guurka: Wiil uu aabihii u diiday inuu guursado oo booliska ku dacweeyay
Waxaa waajib igu ah inaan u guuriyo wiilkayga waana ogahay taas laakin haddii wiilka uu caasi yahay, mas’uuliyadna uusan qaadi karin sidee ayuu qof gabadhiisa u siiyaa wiilkayga, sidee ayaan aabe ama hooyo gabadhooda dhibaato u geliyaa?”
Waa halka uu taagan yahay aabe la yirahdo Moin Gul oo shalay ay u yeereen booliska ka dib markii wiilkiisa uu dacweeyay. Waxaad is weydiineysa halkee ayay booliska ka soo galayaan arrintan? Wiilkiisa ayaa booliska u tagay waxa uuna aabihii ku dacweeyay in uusan rabin inuu gabar guursado.
Waa sheeko ka dhacday degmada Hangu ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa, ee dalka Pakistan halkaas oo wiil dhallinyaro ah sarkaal boolis ah ka codsaday in loo oggolaado inuu guursado.
Waxaan doonayaa inaan dambi iska ilaaliyo?
Codsiga uu sameeyay wiilka oo la yiraahdo Mahmudullah oo uu dhalay Moin Gul ayuu ku sheegay inuu yahay 28 sano jir doonaya inuu guursado si uu isaga ilaaliyo inuu dambi galo.
Maxmudullah ayaa sidoo kale booliska degmada u sheegay in aabihii uusan niyad u haynin guurkiisa inkastoo marar badan uu isku dayay inuu guri yagleelo, wuxuuna ka codsaday in aabihii ay booliska ogoleeysiiyaan inuu guursado.
Isku day ay BBC-du sameeysay ee ahaa inaan la xiriirno Mahmudullah ayaa inoo suurogeliyay ka dib markii uu teleefoon numbarkiisa uu inoo dhici waayay.
Sidee ayay Boolisku ugu guurin karaan?
Sarkaalka booliska ee degmada Hangu ayaa ka codsi la xiriira kiiskan u gudbiyay taliye ku xigeenka booliska Asif Khan si tallaabo u qaado. Markii uu la wareegay kiiska kadib waxa uu xafiiskiisa ugu yeeray Mahmoodullah iyo aabihii Moin Gul waxa uuna si faah-faahsan u ogaaday kiiska.
Taliye ku xigeenka booliska Asif Khan ayaa sheegay in wiilka aabihii uu soo bandhigay dhammaan cadeeymaha la xiriira caasinimadiisa iyo mas’uuliyad darradiisa taas oo muujineysa sida uusan weli diyaar ugu ahayn inuu keligiisa qaado mas’uuliyad.
Waxa uu sheegay in Moin Gul uu yiri haddii Mahmudullah uu mas’uuliyad muujiyo uu diyaar u yahay inuu bil gudeheed ugu guurito.
Mar Moin Gul aan la xiriirnay ayuu sheegay in arrintan aysan ahayn mid toos ah. Moin Gul ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrintan waxa sheegay inuu jiro ilaa 68 sano sano, uuna ka shaqeeyay Isutagga Imaaraadka carabta muddo ku ka badan 37 sannadood waxaan shaqeystana waxaa u diri jiri jiray carruurtayda.
“Waxaan leeyahay saddex wiil, Maxamuudullah waa kan ugu yar, sidoo kale laba gabdhood ayaan dhalay oo waaweyn oo la guursaday, mid waxay leedahay toddoba carruur ah, halka tan kalena ay haysato shan carruur ah.
Moin Gul waxa uu sheegay in Maxamuudullah uu sameeyay dhibaatooyin kala duwan. Mararka qaarkood wuxuu iga qaataa lacag isaga iyo asxaabtiisa ka dibna si khaladan ayuu u soo isticmaalaa.
Waxa uu booliiska u sheegay in isaga iyo saaxiibadii oo mar loo xiray afduub la sheegay inay geysteen. Waxa kale oo ay qaadeen tallaabooyin keenay dhibaatooyin badan. Waxa uu sheegay in haatan uu mishaar qaato balse uusan waalidkii waxba ku caawin.
Previous articleAadan Madoobe oo ka hadlay sababta diidaysa in xildhibaannada lagu cadaadiyo kulamada BF
Next articleSidee Puntland xubin uga weydey Guddiga dib u eegista Dastuurka ee Aqalka Sare
Kulankii ugu horeeyay oo lagu aas-aasayay guddiga isku xirka Hay’adaha ka...